Hitch uye Kushambadzira | Martech Zone
Mugovera, Chivabvu 26, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kana usati wambowana mukana wekutarisa bhaisikopo Hitch. Iyo bhaisikopo ine makore akati wandei, asi ichiri chinoshamisa fananidzo yekushambadzira. Mumufirimu, Alex Hitchens (Will Smith), anodzidzisa vakomana vasina mukana wekuwana musikana wezviroto zvavo. Zano raanopa nderekuedza kudzikamisa zvaunokanganisa, kutarisisa zuva rako, uye ita homuweki yako.
Chiitiko chisingakanganwike chiitiko chekukurumidza-kufambidzana uko kukakavara kunotevera. Sara (Eva Mendes) anonyombwa kuti Hitch anoronga mazuva avo, vachichera zviyeuchidzo pamusoro pake nenhaka yemhuri yake kuti mazuva acho akanganwike. Anotukwa kuti arikushandiswa, Hitch anoshamiswa nekuti ari kungoedza kuita zvinhu zvinomukunda.
Pakati peiyo bhaisikopo ndeyekuti ndeyechokwadi here kana kuti kwete. Yakanga isiri iyo kudzidzisa, shanduko, kuronga, nezvimwe zvakatsamwisa Sarah chaizvo, yaive pfungwa yekuti Hitch anga asiri wepachokwadi, anga asiri kutsvaga hukama, uye anogona kunge anga achingotarisa kuisa imwe notch mukati mubhedha wake.
Kushambadzira ndekwe kuita basa rako rechikoro kuti unzwisise mutengi wako kana tarisiro, wozovaka hukama pane kutendeseka uye kuvimba. Vazhinji vedu tine zvigadzirwa nemasevhisi anoyevedza, asi isu hatigone 'kukwezva' vanhu mukuyedza izvo zvigadzirwa kana masevhisi. Kana ivo chete vakatipa mukana, isu tinoziva kuti tinogona kuvashandura kuva mutengi anotida.
Pamwe pane kumwe kusanzwisisika mune zvekuti Internet ine akawanda kwazvo mabasa ekufambidzana uye vazhinji vanopa mazano ekushambadzira. Vazhinji vedu tinoda kubatsirwa neKushambadzira kwedu (uye kuwana musikana!).
Tags: Datadata kutorasungaMarketingkurongaachaita smith
Doug, ndakaona bhaisikopo kaviri uye ndakarishandisa kuhupenyu hwangu hwepachangu uye hwehunyanzvi. Zvakandiwanira mukomana wandagara ndichiti ndaida uye basa rinotyisa risingarohwe. Nedzimwe nzira ingori bhaisikopo, asi kana ukainyatsoriona, rinenge rakaita seuzivi hwehupenyu. Zano racho rinoshanda pakuwana mukomana / musikana, kusimuka mukambani uye kumisa bhizinesi idzva kana kutotora imba yako yekutanga. Pamamiriro ese iwayo aunoda kuve akanakisa, ita basa rako rechikoro uye nyatsoteerera kune zviri kuitika.
Duane, izvo zvinoshamisa! Ndinofara kuti handisi ndega ndakafarira meseji iri pazasi zvakanyanya.
Ndinobvumirana. Ini ndakavaka makambani maviri ezvidhinha nedhaka paTRUST nevatengi vangu. Mune rimwe remabhizinesi angu, isu tave takakwanisa kuzvisiyanisa pamusika nekutendeseka nevatengi vedu kugadzira komputa! Izuva rinosiririsa kana iwe uri mumwe wekupedzisira akavimbika ekugadzirisa mabhizinesi ekugadzirisa makomputa akatenderedza!
Ndakanga ndiri mubhizinesi rehardware nekuda kwekubwaira kweziso nekuti ndaisakwanisa kukwikwidza. Ini ndaigona kuvaka imwe heki yehurongwa asi ndaiwana butt yangu yakaputirwa nemachines aive 1/3rd mutengo. Ini pamwe ndaifanira kunge ndakagara mubhizinesi asi ndakaneta nekutsanangura kuti unobhadhara zvemhando - kunyangwe nemakomputa anouya mupurasitiki nesimbi bhokisi.
Warevesa pachinhu chimwe… kune mashoma mabhizinesi ekugadzirisa makomputa anogona kutsungirira kumanikidzwa kwemakwikwi. Icho chiratidzo kune kambani yako! Makorokoto.